के तपाईंको आँखा तिरमिराउने समस्या छ ? हेलचेक्र्याइँ नगर्नुस् - Janaswasthya Khabar
You Are Here Home आर्टिकल के तपाईंको आँखा तिरमिराउने समस्या छ ? हेलचेक्र्याइँ नगर्नुस्
जनस्वाथ्य खबर - July 7, 2021 at 22:18	0
सबै उमेर समुहका मानिसमा आँखाको दृष्टि धमिलो देखिने वा तिरमिर देखिने समस्या हुनसक्छ । यसलाई कतिपयले सामान्य सम्झेर हेलचेक्र्याईं गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो समस्या उमेर बढेसँगै बढी देखा पर्दछ । तर पछिल्लो समय कम उमेर वा बच्चा बेलादेखि नै आँखा धमिलो देखिने समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तो समस्या किन देखिन्छ र कसरी जोगिने आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा श्रेष्ठका सुझाव:
यही कारणले मात्र आँखा धमिलो वा तिरमिराउने हुन्छ भन्ने छैन । यसका धेरै कारण छन् । यस्तो समस्या उमेर अनुसार फरक पर्न पनि सक्छ । तर चिकित्सकीय भाषामा अल्छे वा कमजोरी आँखा हुनु नै आँखा धमिलो हुने प्रमुख कारण हो ।
आँखा धमिलो हुँदा सामान्यतया यस्ता लक्षण देखिन्छन्:
सुरुसुरुमा आँखा चिलाउने ।
आँखा धमिलो हुने ।
आँसु बगिरहने ।
आँखा धमिलो हुने कारण:
कमजोर आँखा ।
आँखामा संक्रमण हुनु ।
मोतिबिन्दु हुनु ।
जलबिन्दु हुनु ।
आँखाको पर्दामा चोटपटक लाग्नु वा अन्य समस्या आउनु ।
आँखाको नशामा समस्या आउनु ।
आँखा धमिलो हुनबाट जोगिने उपाय :
आँखालाई स्वस्थ राख्न सँधै सचेत हुने ।
सम्भव भएसम्म धुँवा धुँलोबाट बचाउने ।
उच्च रक्तचाप तथा चिनी रोगका बिरामीले
समय समयमा आँखा परीक्षण गराउने ।
मोतिबिन्दु लगायतका रोग लागेका लक्षण देखिए तुरुन्त उपचार गराउने ।
स्वस्थ आँखा भए पनि कम्तिमा वर्षको एकपटक आँखाको परीक्षण गराउने ।
सन्तुलित र स्वस्थ खानामा ध्यान दिने ।
आँखा संवेदनशील अंग भएकाले कुनै पनि समस्या आए हेलचेक्र्याईं गर्नुहुन्न । तुरुन्त परीक्षण गराई चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि सेवन गर्नुपर्छ । थोरै मात्र ध्यान नदिँदा पनि सदाको लागि दृष्टि गुम्न सक्ने खतरा हुन्छ । समयमै सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।